Nbudata Boeing 717-200 FSX & P3D - Rikoooo
downloads 90 648
The Boeing 717 bụ a azụmahịa airliner wuru Boeing. Ọ bụ ndị kasị nta na ụgbọelu nke ya nso. Ulo oru na 1995 n'okpuru aha MD-95 ikpeazụ akụkụ nke ika McDonnell Douglas e zụtara site Boeing na 1997. The 717 designation mbụ e bu n'obi ikwu na ndị agha version nke 707, na C-135 ma e jiri ya mere laghachiri MD-95.
Nke a 100 oche-azụmahịa ugbo elu dịghị mgbe ike iru ya lekwasịrị, na mkpebi ijide e kwuru n'ihu ndị na ufọt ufọt January 2005 site Alan Mulally, president nke Boeing si azụmahịa ugbo elu nkewa: "The ahịa n'ihi na a ugbo elu-anọgideghị na-emepụta 717 karịrị anyị ẹdude iwu. ". Ma mkpebi a kwadebere ebe ọ bụ na mbubreyo 2001 na ọtụtụ narị nde US dollar e wepụtara maka nzube a. (Wikipedia)
Ihe ngosi zuru ezu banyere nke a add-on dị na vidiyo dị n'okpuru:
Onye edemede: Alejandro Rojas Lucena, David Robles